Ntsay Christian: hotohizana ny ezaka vita | NewsMada
Ntsay Christian: hotohizana ny ezaka vita
“Hotohizantsika ny ezaka hanamafisana ny filaminana sy ny fandriampahalemana manerana ny Nosy …”, hoy ny fanazavan’ny PM Ntsay Christian, nandritra ny tatitra mikasika ireo fandaharanasa fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana teny amin’ny CCI Ivato, ny alatsinainy teo.
Hohatsaraina hatrany ny fomba fiaraha-miasa eo amin’ny mpitandro filaminana telo tonta (ny tafika malagasy, ny zandarimariam-pirenena ary ny polisim-pirenena) ary hotohizana ny fampitaovana, araka ny nambaran’ny PM. Nohamafisiny manokana fa nisy ny ezaka vitan’ny fanjakana manoloana ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana ka isan’izany ny fahatrarana ireo jiolahy nokarohina hatry ny ela izay nalaza ratsy tamin’ny fakana an-keriny. “Efa tsy maheno firy intsony koa isika amin’ny fandrobana mitam-piadiana sy ny fanafihana taksiborosy amin’ny faritra maro manerana ny Nosy”, hoy izy. Teo koa ny fandravana ireo voly rongony tamina velaran-tany amina hekitara maro ao Andriry
Basy tsy ara-dalàna miisa 811 ny azon’ny mpitandro filaminana…
Fa ankoatra izany, voalazan’ny PM tao anatin’ny tatitra nataony fa nihena 24 isan-jato ny halatra omby, nihena 49 isan-jato ny omby very. Basy tsy ara-dalàna miisa 811 kosa ny azon’ny mpitandro filaminana tamina toerana maro any ambanivohitra ka basy mahery vaika ny 31 amin’ireo. Ho an’ny eto an-dRenivohitra manokana, basy miisa 110 ny azon’ny mpitandro filaminana niaraka amin’ny bala miisa 495. Taolam-paty milanja 228kg ny tratran’ny mpitandro filaminana nandritra ny taona 2019. Anjatony kilao maro ireo vatosoa nokasaina haondrana an-tsokosoko no tratra teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Be. Teratany vahiny miisa 240 no naverina nody any amin’ny teny am-pahatongavana ary 55 kosa ireo noroahina raha 245 ireo tsy manana taratasy ara-dalàna hipetrahana eto amintsika ka naverina any aminy.